Phambi kokuba ungenise - iAfrArAriv
Ulwazi ngokubanzi ngaphambi kokungenisa
Kutheni le nto kufanelekile ukuba wabelane ngeziphumo zakho zophando kwiphepha lokuqala?
Imibhalo-ngqangi yangaphambi kokubamba okwenziwe kwindawo yeAfroArxiv Ukusasazwa simahla kunye nokukhawulezileyo kwaye Ingxoxo yehlabathi Iziphumo zophando ngaphambi kokupapasha kwijenali ehlolwe ngokutsha koontanga.
Onke amanqaku apapashiweyo aya kunikwa CC BY Iphepha-mvume le-4.0 kunye a DOI (into eyidijithali) kunye nokufakwa kwisalathiso kuGoogle Scholar. Xa uzisebenzisa kwakhona, kwaye ngakumbi xa ucaphula, imeko yeprinta kufuneka iphawulwe ngokucacileyo.
Nceda qaphela: I-AfricArXiv ayilojenali kwaye alivavanyi umgangatho wobunzululwazi obhalwe ngesandla kuzo zonke iinkcukacha. Nje ukuba i-manuscript ipase imodareyitha kwaye ipapashiwe, iyaphikelela kwinkqubo engapheliyo. Sinelungelo lokurhoxisa imibhalo ebhaliweyo emva kokubhengezwa ukuba ubuqhetseba okanye ubungqangi buchongiwe.
Sikhuthaza ukuhlangana koluntu ngokunika izimvo nokwabelana ngenqaku. Funda ngaphezulu ku info.africarxiv.org/peer-review.
Jonga ukuthotyelwa kwejenali kunye ne-embargo Sebenzisa I-SHERPA / RoMEO Inkonzo yokujonga imigaqo-nkqubo yeprint yejenali ngeenkcukacha ezithe vetshe ngeendlela zokhetho lokuzigcina kwijenali oceba ukupapasha inqaku lakho.
Sikhuthaza ukuhanjiswa okuvela
Izazinzulu zaseAfrika ezisekwe kwilizwekazi laseAfrika
Izazinzulu zase-Afrika ngoku ezizinze kwiziko lokubamba ngaphandle kwe-Afrika
Iinzululwazi ezingezizo ezase-Afrika ezithi zenze ingxelo ngophando olwenziwe kwimimandla yaseAfrika; ngokukhethekileyo ngababhali-ndima base-Afrika abadweliswe
oososayensi abengengobaseAfrika abanika ingxelo ngophando oluhambelana nemicimbi yase-Afrika
Samkela ezi ntlobo zilandelayo zesandla -Umaphambili okanye iposti yeposi:
Amaphepha okuphononongwa kwakhona
Iziphumo 'ezingezizo' kunye 'null' iziphumo (okt iziphumo ezingayixhasi i-hypothesis)
Amaphepha edatha kunye neendlela
Amaphepha enkcazo edatha
Ukuguqulwa koku kungasentla
Ezinye iintlobo zefomathi ziya kuqwalaselwa ngokungeniswa.
Yongeza iifayile ezongezelelweyo kunye nedatha
Unokongeza kwaye uqhagamshele kwiifayile ezongezelelweyo nakweyiphi na ifomathi kwisitoreji esingenamkhawulo.
Amanqaku ophando apapashiweyo
Ukuba ufuna ukwabelana ngesandla esivele sapapashwa njengenqaku lejenali, yiya ku njani.cz kwaye unamathisele inqaku le-DOI kwimaski yokukhangela; Khangela ukuba 'njengoprint' uza phakathi kweendlela zokwazisa ezamkelweyo.
Uninzi lwejenali zemfundo luye lwamkela ugcino lwangaphambili, abanye abavumi. Ukufumana okungakumbi jonga Iziko ledatha leSherpa / RoMEO.
Lungisa umbhalo wakho obhaliweyo
Faka umbhalo wakho obhaliweyo njengefayile yePDF.
Ukuba ufuna uncedo ngokufomatha, ungasebenzisa itemplate yesandla elandelayo edityaniswe liqela lokumodareyitha lokungeniswa kweAfricArXiv.
Yongeza inqaku kwiphepha elingaphambili lichaza "Lo ngummiselo ungeniswe kwijenali ye-XXX" apho kufanelekileyo. Nje ukuba lo mbhalo-myalezo wamkelwe yijenali eqwalaselwe lontanga ungawuhlaziya owokuqala umthetho-mfanekiso okanye umyalezo obhaliweyo owamkelweyo kwaye uwuguqule lo mbhalo "Olu lwazi lubonisa ukuba abantu bayaphononongwa kwaye bamkelwe kwijenali ye-XXX."
Nceda uqinisekise ukuhlonipha ilungelo lokushicilela elifanelekileyo kunye neemeko zeelayisensi zeefayile oyifakileyo. Kwimibhalo yemibhalo yezandla, ilayisensi esetyenziswa kakhulu I-CC-BY-SA 4.0.
Qhubeka nokungenisa ilungelo lakho lokuqala
Ngoku ukuba ufundile lonke ulwazi oluyimfuneko onokuthelekisa kwaye ukhethe phakathi kwamaqonga eqabane lethu ukuze ungenise umbhalo obhaliweyo wakho:
Sisebenzela ukwakha indawo egcinwe ngumniniyo yase-Afrika kwaye ke ngoko siyafikelela kwaye sixoxa neminye imibutho kunye namahlakani. Okwangoku, sisebenzisana nabanye ababoneleli beenkonzo abaphambili njengoko kudweliswe ngezantsi.